Amasudi amadoda, konke odinga ukukwazi | Amadoda aSitayela
Amasudi amadoda, konke odinga ukukwazi
U-Ignacio Sala | | imfashini
Uma singesibo abantu obani imvamisa sigqoka isudiNgaso sonke isikhathi le ngubo siyishiye ekugcineni kwekhabethe ngaphandle kokuyinaka. Simkhumbula kuphela uma besitshela ukuthi sinomcimbi ofana ne-BBC (imishado, imibhabhadiso noma imikhosi).
Ngaleso sikhathi sisheshe sabheka ekhabethe ukuthi isudi yethu izokwenzani hlola ukuthi lawo kilos angeziwe azosivumela yini ukuthi singene ngaphakathi kwesudi, noma noma kufanele siqale ukuhamba sizungeze ibhulokhi lesakhiwo sethu ukuze silahlekelwe yilabo kilos abengeziwe, selokhu sagcina ukusebenzisa leli suti.
Njengomthetho ojwayelekile, sineyodwa kuphela. Futhi uma sinokuningi, kungenxa yokuthi siyahamba ukuthenga amasudi amasha njengoba sikhuluphele. Uma ucabanga ukuthenga isudi entsha, ngoba le onayo indala kakhulu, incane kakhulu kuwe noma ngoba nje awusayithandi, kuMadoda anesitayela sizokukhombisa umhlahlandlela omncane wezici okufanele ucabangele ukuthi uzikhetha nini isudi evumelana kangcono nezidingo zakho nezinto ozithandayo. Ngezansi sichaza imininingwane ye- amasudi amahle abesilisa esetshenziswa kakhulu usuku nosuku.
Imithetho emi-5 yokuhlanganisa uthayi, ihembe nesudi
1 Izinhlobo zamasudi abantu besilisa
1.1 Ijazi lasekuseni
1.2 Inkinobho ephindwe kabili
1.4 Intamo kaMao
2 Izinhlobo zesudi ephezulu
2.1 I-Slim Fit
2.2 I-Fit eyenzelwe yona
2.3 I-Classic Fit
3 Ungayigqoka kanjani isudi nehembe nothayi
4 Ungayigqoka kanjani isudi ephelele
Izinhlobo zamasudi abantu besilisa
Njengengubo okuyiyo, ngaphakathi kwamasudi sithole izinhlobo ezahlukene, njengoba kwenzeka ngokwesibonelo ezingutsheni zabesifazane zomakoti, kungaba nge-neckline ende, engenantambo, isikebhe ...
Singabheka ijazi lasekuseni njengo ingubo enhle kunazo zonke ngaphakathi kwamasudi, ilungele imikhosi emini. Ingxenye yesiteleka sejazi lasekuseni ijazi le-frock, okufanele lihambisane nevesti nebhulukwe ngaso sonke isikhathi, yomibili enemigqa. Ngokuqondene nehembe nothayi, kufanele ngokukhethekile kube ngamathoni akhanyayo nemibala eqinile, ukuze aqhathanise nevesti nejazi.
Inkinobho ephindwe kabili
Lolu hlobo lwamasudi ihlangana ingxenye yebhantshi esifubeni, ucofe ingubo ngemigqa emibili yezinkinobho. Ngaphandle kweqiniso lokuthi munye kuphela owalayini ababili osebenzayo, omunye uyaqhubeka nokugcinwa ngendlela yokuhlobisa. Ngaphakathi kwebhantshi sithola inkinobho esivumela ukuthi siqinise ijakhethi ukuze ingavali kuphela ngenkinobho yangaphandle futhi ukuze ingubo ilungiswe kahle emzimbeni.
Ijazi langaphansi yingubo okusemthethweni kakhulu kumuntu emikhosini kusihlwaIyalingana nengubo yasekuseni yosuku. Yenziwe ngejazi elimnyama le-frock elinezengezo zikasilika futhi inomsila ovulekile, yize nayo inomsila ovaliwe. Ngaphandle sithola umugqa owodwa noma emibili yezinkinobho, umsebenzi wazo omkhulu ukuhlobisa. Ijazi langaphansi kufanele lihambisane nesikhafu sikasilika ephaketheni lakho ngaso sonke isikhathi. Amabhulukwe angaphansi ayingenayo imicibisholo, ijazi lalo okhalweni lendlovu kanye nehembe elimhlophe elinekhola lokuxhumana kanjalo nothayi womnsalo.
Isikhathi esithile manje kubonakala sengathi amazwe aseMpumalanga abe semfashinini. Lolu hlobo lwesudi lusinikeza okokugqoka okujwayelekile kwe-Imperial China. Uhlobo lwe intamo ifushane futhi iphakanyisiwe ngaphandle kokufaka ama-lapels ajwayelekile. Amathiphu entamo imvamisa ayindilinga, yize sithola namanye amamodeli lapho amathiphu aqonde khona, yize engazizwa kahle ngokwengeziwe.
I-tuxedo ingubo ejwayelekile okufanele siyigqoke ukuya ku-a umcimbi omnyama wethayi ebusuku, kepha ngokungafani nebhantshi lomsila, i-tuxedo ayifinyeleli ezingeni lomkhosi olimele, njenge-suit yesudi. I-tuxedo yakhiwe ngejakhethi, ibhulukwe, ihembe elinothayi womnsalo, ivesti nothayi noma uthayi, yize kungakuhle ukusebenzisa uthayi womnsalo.
Yilokho isudi evamile sonke esinayo ekhoneni elithile lekhabethe lethu futhi yakhiwe ngamabhulukwe nejakhethi, yize kwesinye isikhathi ibuye ihlanganiswe nevesti. Imibala ejwayelekile kakhulu yamasudi okuphatha ingwevu futhi iluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama, yize omnyama ukhona nakwezinye zazo. Ngaphakathi kwamasudi okusika aphezulu sithola izinhlobo eziningana esizichaza ngezansi.
Izinhlobo zesudi ephezulu
Lolu hlobo lomklamo luyisici esikhulu kunazo zonke kubantu abasha, kusukela Ifakwe okhalweni kanti umlenze unciphile. Lokhu kusikwa kulungele amadoda amancane, anesiqu esiphakathi / esifushane, njengoba isitayela isibalo, sinikeza umuzwa wokuba mude kancane. Ijakhethi ivame ukugqokwa iboshwe ngenkinobho ephezulu kuphela. Uma unamakhilogremu ambalwa, ngezizathu ezisobala, noma uma umude, lolu akulona uhlobo lwakho lwesudi.
I-Fit eyenzelwe yona
Lo mklamo ufana nowedlule, kepha hhayi njengoba uqinile okhalweni, okwenzile enye yezingubo ezifunwa kakhulu ngumphakathi. Kokubili ibhantshi namabhulukwe, njengoba engaxinene kangako, kusinika inkululeko enkulu yokuhamba. Kulolu hlobo lwesudi akudingekile ukuthi kuboshwe inkinobho ephezulu yebhantshi, yize njengoba sizophawula ngezansi ngaso sonke isikhathi kuhle ukuthi siyigqoke cishe kuwo wonke amasudi.
Le suti ilungele bonke abantu abafuna uzizwe ukhululekile ngesudi ngokusinikeza amaphedi wamahlombe achazwe kabanzi. Zikulungele ukusetshenziswa nsuku zonke, ukwakheka kwazo akupheli isikhathi ngakho-ke ngeke siphoqeleke ukuvuselela ikhabethe lethu kaningi, njengoba kungenzeka nangezinye izinhlobo zesudi engizichazile ngenhla.
Ungayigqoka kanjani isudi nehembe nothayi
Lapho sesicacile ngohlobo lwesudi efanela umzimba wethu noma esikuthandayo, sekuyisikhathi sethu ukuhlanganisa isudi yethu nethayi nehembe elihambisanayo. Sesivele sithathe isinyathelo sokuqala nesibaluleke kakhulu ngokukhetha umbala wesudi. Manje sekuyithuba lehembe. Uma isudi limnyama, mpunga noma luhlaza okwesibhakabhaka, imibala evame kakhulu kumasudi, kufanele ukhethe ihembe elikhanyayo eliqhathanisa nesudi.
Umbala wothayi kumele uqhathanise nehembe kodwa kufanele sizame ukugwema ngangokunokwenzeka, ukuthi umbala ofanayo nesudi. Uma isudi esiyikhethile linemivimbo, ihembe nothayi kumele kucace. Kwenzeka okufanayo ecaleni elihlukile, yize isudi engenalutho ingahlanganiswa ngokuphelele nehembe nothayi ngemibala eqinile. Uma sithanda imivimbo, singasebenzisa ihembe elinemigqa elincanyana nothayi onemivimbo emikhulu ukuyihlanganisa, kodwa ungalinge ubenze balingane nehembe, ngoba ekugcineni bayadideka.
Ungayifaka kanjani inkinobho yesudi yakho?
Ithoni yesikhumba sethu nayo ibalulekile lapho ukhetha ihembe. Uma sinesikhumba esihle, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka ilungile. Uma, ngakolunye uhlangothi, ithoni yethu yesikhumba ibomvana, amathoni aluhlaza alungile. Labo abathanda ukushiswa yilanga, abamane bathathe uhambo lokuhamba ngomgwaqo baphenduka babe nsundu, imibala ewolintshi nepinki ihlangana kahle.
Ungayigqoka kanjani isudi ephelele
Impela uyasazi isisho esithi "yize inkawu igqoka usilika, inkawu ihlala". Lesi sisho silungele lokho engizophawula ngakho ngokulandelayo. Ukugqoka isudi ngobuhle akugcini ngokugqoka isudi, isikhathi. Bangu imithetho ethile okumele ilandelwe ngamadoda uma sifuna ukugqama sikhombise isudi yethu ngaphezu kwezinye.
Ihembe kufanele njalo thwebula imikhono webhantshi okungenani umunwe owodwa noma emibili. Uma okungenani leso sikhala singaphumeli ngaphandle, kuzofanele sishintshe ihembe lisibonise elikhombisa ngaphansi kwejakhethi.
Lokhu kuza ngokuhlangana nokwedlule. Ihembe njalo kufanele kube imikhono emide. Yize kubonakala kusobala, akukho okubi ngokwengeziwe emgubhweni wokubona abazobe bekhona begqoke ihembe elinemikhono emifushane nesudi.
Hhayi kangako noma ayinampandla. Noma nini lapho sithenga isudi, kufanele sicele isitolo ukuthi silungisa phansi kwephenti. Uma uya enxanxatheleni yezitolo ngiyangabaza ukuthi bangakwazi ukukwenza, kepha uma uthenga esikhungweni esikhethekile, ngeke babe nankinga yokulungisa ukuphakama kwakho, uma kungenjalo, uzozizwa sengathi uthenge isudi emakethe .
Inkinobho yesibili njalo eqaqa izinkinobho. Inkinobho yokuqala yejakhethi ihlale ilula, hhayi ukusho ukuthi iyisibopho, ukuboshwa. Khumbula ukuthi kuyisudi hhayi ijakhethi ukusivikela emakhazeni.
Uma sesihleli etafuleni, kufanele siqaqe izinkinobho zejakhethi ngokuphelele uma sizodla nayo idina. Uma ufuna ukuba yi-summum of elegance, kufanele uqaqe izinkinobho uma uhlala phansi.
Iningi lamasudi livame ukuba nemibala emnyama, okusiphoqa ukuthi sikhethe ihembe elinayo umbala ophikisana nombala wesudi, njalo ngemibala eqinile uma kungenzeka. Uma isudi linemigqa, ihembe nothayi kumele kube yimibala eqinile.
Yize abesifazane bengamakhosikazi ezesekeli, ekhabethe labesilisa, ikakhulukazi uma begqoke amasudi bafanelekile futhi uma sibakhetha ngokucophelela, ingasinikeza isithombe esithandekayo. Izesekeli zokugqoka isudi yethu ibanga kusuka kwizibuko zelanga, kuya esikhafuni esilula, iwashi (esingazenza ngezifiso ngentambo ezahlukahlukene ezinemibala).
Inketho engcono kakhulu yokuthenga isudi esingayenza njengamanje thola ezitolo ezinikelwe kuyo. Abasebenzi bazokweluleka ngohlobo lwesudi enhle kakhulu kuye ngohlobo lomzimba wakho. Ngaphezu kwalokho, zizohlala zikunikeza usayizi ofanele owugqokayo, hhayi owodwa, hhayi owodwa, ngale ndlela sizogwema leyo mibimbi ejabule kabi kabi kumasudi futhi ehambisana neqiniso lokuthi isudi encane (noma sikhulu kakhulu kule suti, kuya ngokuthi uyibuka kanjani) noma isudi inkulu kakhulu.
Njengamanje kunzima ukuthola izitolo ezithungayo lokho yenza amasudi afanele, kepha uma iphakethe lethu likuvumela, kuyindlela engcono kakhulu. Isikhathi esithile manje, azisabizi njengakuqala, ngakho-ke okungcono kakhulu ukuthi uhlale usebenzisa lezi zinhlobo zezitolo, ikakhulukazi uma kuzofanele sisebenzise isudi ngaphezu kwalokho ebesikucabanga ekuqaleni, mhlawumbe ngoba zomsebenzi noma ngoba inani elikhulu lemikhosi liza esikhaleni esifushane.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amasudi amadoda, konke odinga ukukwazi
I-athikili iyathakazelisa kakhulu, ngiyakuhalalisela kakhulu ngokuthi wabelane futhi uqhubeke nokuphenya ...
UStella McCartney, usezokwethula ulayini wamadoda (kanye nevegan)
Kumnandi futhi kunesitayela - Amasokisi angaphandle kwamabhulukwe